प्रचण्डजीको भविष्यको चिन्ता लागिरहेको छ : नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँगको अन्तर्वार्ता (भिडियो) - Ratopati
अहिले ऐन संसोधन गर्न कठिन हुने भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ शक्तिका सवै उम्मेद्वारलाई आँखा चुनाव चिन्ह दिने विकल्प अगाडि सार्नुभएको छ । तत्कालका लागि यो विकल्पमा जाँदा समस्याका हल हुन सक्छ । यहाँ के ठान्नुहुन्छ ? यो बहुदलिय लोकतन्त्रको हत्या हो । प्रचण्डको नियतले गरेको हुन् । प्रधानमन्त्री र सरकारले विद्येयक पास गर्ने हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । मलाई थाह छैन भन्न मिल्दैन । कुनैपनि विद्ययक पारीत गर्न संसदमा पठाउनुपर्छ ।
तपाईं र मोहन वैद्य किरण आन्दोलनमा सँगै देखिनु भएको छ । किरणको चुनावी मोर्चाले चुनावमा भाग लिने बताएको छ, तपाई के ठान्नुहुन्छ, उहाँहरुसँग तालमेलको सम्भावना रहन्छ ? सबैसँग समदुरी सम्बन्ध छ । काँग्रेस,एमाले र प्रचण्ड माओवादीसंग समदुरी हुन्छ । यी सबै पुराना शक्तिहरु नै हुन । पुराना शक्ति संग तालमेल गर्ने संयुक्त मोर्चा बनाउने भन्ने हुदैन । यी सबै शक्तिहरुका साइन बोर्ड मात्र फरक हुन् । कार्यगत एकता हुन सक्छ । वैद्यजीले फरक निर्वाचनमा भाग लिने भनेको छ । हेराँै कस्तो निति लिनु हुने छ ।